The MYAWADY Daily: December 2016
အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) ပန်တျာဌာန နယ်ဝေး ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူများအတွက် အဆောင်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထား
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ အနုပညာ ဦးစီးဌာန လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသနဌာန (ခွဲ) အနုပညာ အထက်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) ပန်တျာဌာန တွင် နယ်ဝေးမှ လာရောက်၍ ပညာသင်ကြား ကြသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အတွက် နေထိုင်နိုင်ရန် အဆောင်များ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက် ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အနုပညာ အထက်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) ပန်တျာဌာနသို့ မန္တလေးဧရိယာ ပြင်ပမှ လာရောက်ပညာ သင်ကြားသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို အဆောင် နေထိုင်ခွင့် လက်ခံသွား မည် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် လာရောက် သင်ကြားကြသော နယ်ဝေး ကျောင်းသား ၁၄ ဦးကို ယခုလ ၁၅ ရက်မှစတင်၍ အဆောင်များ၌ စတင်နေထိုင်ခွင့် ပြုထားကြောင်း အနုပညာ အထက်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) ပန်တျာဌာနမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးအောင်သက်ထွန်း က ပြောပြသည်။
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် အနုပညာ အထက်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) ပန်တျာဌာန၌ ပထမနှစ်တွင် ပညာသင်ကြား နေသော ကျောင်းသား ရှစ်ဦး၊ ကျောင်းသူ ရှစ်ဦး၊ ဒုတိယနှစ်တွင် ပညာသင်ကြား နေသော
ကျောင်းသား ကိုးဦး၊ ကျောင်းသူ သုံးဦး၊ တတိယနှစ်တွင် ပညာသင်ကြား နေသော ကျောင်းသား ၁၅ ဦး၊ ကျောင်းသူ နှစ်ဦး စုစုပေါင်း ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား ၄၅ ဦး ပညာသင်ကြား လျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါဌာနမှ သိရသည်။
အနုပညာ အထက်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) ပန်တျာဌာန၌ ပညာသင်ကြားရန် နှစ်စဉ် မေလပိုင်းတွင် ကျောင်းသားအသစ် ခေါ်ယူလျက်ရှိရာ သတ္တမတန်း အောင်မြင်ပြီး အသက် (၂ဝ)နှစ် မကျော်သူများ တက်ရောက်နိုင် ကြောင်း အဆိုပါဌာနမှ သိရသည်။
စက်မှုသင်တန်းကျောင်းသုံးခု ထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးလျက်ရှိ
မကွေးမြို့ရှိ စက်မှုသင်တန်းကျောင်းကို တွေ့ရစဉ်
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် စက်မှု သင်တန်းကျောင်း သုံးခု ထပ်မံတိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆွေးနွေးလျက် ရှိကြောင်း စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန သင်တန်းကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ထံမှ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အရ မန္တလေး၊ ဆင်တဲ၊ သာဂရ၊ ပခုက္ကူ၊ မကွေးနှင့် မြင်းခြံမြို့ တို့၌ နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းကာ သင်တန်းကျောင်း ခြောက်ခု ဖွင့်လှစ် ထားကြောင်း သိရသည်။
စက်မှုဝန်ကြီး ဌာနသည် စက်မှု သင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ရာတွင် မြေနေရာ၊ အဆောက်အအုံ စသည့် လိုအပ်ချက်များ ကို ပံ့ပိုးပေးထားပြီး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များကလည်း စက်ပစ္စည်းများ၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာ များကို ပူးပေါင်း ပါဝင်ကူညီ ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် စက်မှုနှင့် အသက်မွေး ပညာရပ် များကို သင်ကြားလိုသူ များအနေဖြင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၌ အခမဲ့ ရွေ့လျား သင်တန်းများ တောင်းခံနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းအခမဲ့ သင်တန်း များကို အလွယ်တကူ တောင်းခံနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး လူဦးရေနှင့် သင်တန်းပေးနိုင်ရန် နေရာရှိပါက ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အခမဲ့သင်တန်းများ တောင်းခံရာတွင် လူဦးရေ ၂၅ ဦး စုစည်းမှု ရှိရန်လိုပြီး စက်မှုဇုန်များ အတွက် သင်တန်းဖွင့်လှစ် ပေးရန် တောင်းဆိုလို သူများ အနေဖြင့် ဘာသာရပ် ငါးခု၊ ကျေးလက်ဒေသများ အတွက် သင်တန်းတောင်းသူ များအနေဖြင့် ဘာသာရပ်သုံးခု တောင်းခံနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအခမဲ့ သင်တန်းများကို ရယူလိုပါက စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန ရုံးအမှတ် (၃ဝ) နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူ၍ သင်တန်းများ တောင်းခံနိုင်ပြီး ဖုန်း -ဝ၆၇- ၄ဝ၅၁ဝ၁ နှင့် ဝ၆၇- ၄ဝ၅ဝ၅၁ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Labels: ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေး
Economists’ advice on unstable currency exchange rate
Yangon December 30
Local economists said weakening local currency value has an impact on the country’s economy and would result in an increase in basic commodity prices.
U Hla Maung, an economist said: “Greenback appreciation is due to the unbalanced ratio of demand and supply. The main causes are higher trade deficits, rampant black markets and dollar manipulations.”
Dr Aung Kyaw Oo, an economist said: “The government should shift from Free Floating Exchange Rate system to Managed Floating Exchange Rate system. In addition, it needs to crack down on black markets in order to stabilize currency exchange rates and immediately lift the restrictions on the withdrawal of money from foreign bank accounts (at most US$-5000aday) twiceaweek so as to ensure the direct transaction between banks and users.”
U Aung Nyunt Pe, an economist from the South East Asia Banks Syndicates said: “The government needs to prioritize foreign investments which will bring huge capitals into the country, check the revolving of capital brought-in, ensure the inflow of money sent back by Myanmar migrant workers via official routes and encourage the infl ow of foreign currencies kept in the Myanmar Foreign Trade Bank and the Myanmar Investment and Commercial Bank, inspect the infl ow of exports and re-exports earnings into the local market during six months and ensure the availability of over US$-4 billion aid promised by international development organizations (the World Bank, the Asian Development and the Japan International Cooperation Agency).”
Bank expert U Than Lwin, ex-chair of the Central Bank of Myanmar said: ‘‘The government needs to lay downapolicy of encouraging the extensive use of local currency in services and production sectors, encourage the remittance of local currency with the use of credit cards and reduce some items of imports.”
Dr Hla Maung, retired ambassador and economist said: “The government should allow opening of foreign banks, extendingahelping hand to entrepreneurs for mass production, the production of value-added products and increasing exports and providing assistance to agriculture sector and supporting industries in the whole supply chain system. The Ministry of Planning and Finance should lay down short-and long-term plans and strategies for the works, in cooperation with the Ministry of Commerce the Central Bank of Myanmar.”
Posted by myawady at 10:22 AM2comments:
Labels: Currency, Economic
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုမည့် မျက်မမြင်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို စခန်းသွင်းသင်ကြားပေး
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကျင်းပမည့် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲတွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆို ကြမည့် မျက်မမြင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များကို ကြည့်မြင်တိုင် မျက်မမြင်ကျောင်း၌ စခန်းသွင်းလေ့ကျင့် စောင့်ရှောက်မှုများဖြင့် သင်ကြားပေးလျက် ရှိကြောင်း အဆိုပါကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါ်စုစုမာ ထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ မျက်မမြင်ကျောင်း၌ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် မျက်မမြင် ကျောင်းသား လေးဦး၊ ကျောင်းသူ သုံးဦး စုစုပေါင်း ခုနစ်ဦး ရှိပြီး ဒီဇင်ဘာလဆန်း ကတည်းက စတင်ကာ စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့် ကာလအထိ စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
''စာမေးပွဲဖြေမယ့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ အာဟာရမျှတစွာ ရရှိဖို့ရယ်၊ စာမေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြေဆို နိုင်ဖို့ကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် ကတည်းကစပြီး စာမေးပွဲဖြေချိန် အထိ စခန်းသွင်းပြီးတော့ လေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေမယ့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ အတွက် အဖွဲ့ဝင်ခုနစ်ဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကြီးကြပ် ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ ကနေ လိုအပ်တဲ့ အနီးကပ် စောင့်ရှောက် သင်ကြားမှုတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒီကလေး တွေထဲမှာ ဂုဏ်ထူးမှန်းထားတဲ့ ကလေးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်'' ဟု ဒေါ်စုစုမာ ကပြောသည်။
ယင်းကျောင်း၌ လုံးဝမမြင်သူ များနှင့် အနည်းအကျဉ်းသာ မြင်ရသည့် အမြင်အာရုံ ချို့တဲ့သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို အခမဲ့လက်ခံ သင်ကြားပေးကာ အသက် ခြောက်နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး
တချို့မှာ ဦးစီးဌာနထံ တင်ပြခွင့်ပြုချက် အရ လက်ခံသင်ကြား ပေးမှုများလည်း ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ ၊ စာ (၃)
30 12 2016 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
မုံးကိုးမြို့နှင့် အနီးတစ်ဝိုက် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်စဉ် လက်နက်၊ ခဲယမ်းများ သိမ်းဆည်းရမိ
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ဒေသ၊ မုံးကိုးမြို့နှင့် အနီး ပတ်ဝန်းကျင်အား တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ် ယမန်နေ့ နံနက် ၇ နာရီခွဲခန့်တွင် မုံးကိုးမြို့အနီး လမ်းဘေးချုံ အတွင်းမှ ဆာလာအိတ်ဖြင့် ထုပ်ထားသော အမ် ၂၁ သေနတ် တစ်လက်၊ ၄င်းကျည်အိမ် တစ်ခုနှင့် ၄င်းကျည် ၂၁ တောင့်တို့ကို သိမ်းဆည်းရမိ ခဲ့သည်။
အလားတူ ယမန်နေ့မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲခန့် တွင်လည်း မုံးကိုးမြို့၊ အမှတ်(၆) ရပ်ကွက်ရှိ လူမနေသည့် အိမ်ဟောင်းအတွင်းမှ ပစ္စတို တစ်လက်၊ ကျည်မျိုးစုံ ၅၃၃ တောင့်၊ RPG ဗုံးသီးနှစ်လုံး၊ စက်လတ် ကျည်ခါးပတ် နှစ်ခု၊ လက်ပစ်ဗုံးနှစ်လုံး နှင့် လမ်းလျှောက် စကားပြောစက် တစ်လုံးတို့ကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။
တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက နယ်မြေ လုံခြုံရေးနှင့် ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
29 12 2016 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
ဥရောပသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်များ ဦးဆောင်မှုအားနည်းချက် ကြောင့် ဥရောပမှာ အကြမ်းဖက်မှုများ ပိုဖြစ်နေတာလား ?
ဗြိတိန်အနေဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ခွဲထွက်ရန် အသံထွက်သည့် အချိန်မှစ၍ ဥရောပတွင် စည်းလုံးမှု အနည်းငယ် ပျက်ပြား ခဲ့ရသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အားလုံးက မခွဲထွက် စေချင်သော်လည်း ဗြိတိန်က ကိုယ့် အကျိုးစီးပွားကို ကြည့်ပြီး နောက်ဆုံး၌ ဥရောပသမဂ္ဂ မှ ခွဲထွက်သွားသည်။
ထို့နောက် ဗြိတိန်တွင် မဲတစ်မဲမျှ မရှိဘဲ ထရီဆာမေ က ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးကို တိုက်ရိုက်ရရှိ ခဲ့သည်။ အီတလီတွင်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်က နုတ်ထွက် သွားပြန်သည်။ ဂရိတွင်လည်း စီးပွားရေး ပျက်ကပ်ဆိုက် နေသည်။ ဂျာမနီ တွင်လည်း ဝန်ကြီးချုပ် အိန်ဂျဲလာ မာကယ်လ် က ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည် တံခါးဖွင့်မူဝါဒ ကြောင့် အကြီးအကျယ် ဝေဖန်ခံရလျက် ရှိသည်။
ထို့ပြင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မာကယ်လ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဦးမည် ဟု ဆိုထားသောကြောင့် ၄င်းအတွက် မျက်နှာပန်းမလှ အဖြစ်ရဆုံး အချိန်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်သမ္မတ ဖရန်ဆွာ ဟော်လန်ဒ် ကလည်း သမိုင်း အဆက်ဆက် ပြင်သစ် သမ္မတများ အနက် ဂုဏ်အရှိန်အဝါ အနည်းဆုံး ဆိုသည့် နေရာကိုပင် ရောက်ရှိနေပြီး ၄င်း၏ လက်ထက်၌ ပြင်သစ်တွင် အကြီးမားဆုံး ဆိုသည့် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားသည်။ ချာလီဟတ်ဘ်ဒို အကြမ်းဖက်မှု၊ ပဲရစ် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် နီးစ် အကြမ်းဖက်မှု များသည် ပြင်သစ်သမိုင်း တစ်လျှောက်တွင် လူသေမှု အများဆုံးနှင့် အကြီးမားဆုံး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာ လတုန်းကလည်း ပြင်သစ်တွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် လူငါးဦးကို ပြင်သစ်ရဲများက ဖမ်းဆီးရသေး သည်။ ဂျာမနီ တွင်လည်း ကဇာတ်ရုံ အပြင်ဘက်၌ ဗုံးခွဲသည်။ ရထားပေါ်တွင် ဓားနှင့် လိုက်ခုတ်သည်။ သေနတ်နှင့် လျှောက်ပစ်သည်။ ယခုနောက်ဆုံး ခရစ္စမတ် ဈေးတန်းကို ကားဖြင့် ဝင်တိုက်သည်။ ဂျာမနီ၏ အကြီးမားဆုံး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှု ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမနီတို့တွင် မူဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ပိုမို မြင့်တက်လာပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အမုန်းပွားမှု များ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိသည်။ ဂျာမနီ၌ ဆိုလျှင် ပိုဆိုးသေးသည်။ ဂျာမနီ သမိုင်းတွင် မဖြစ်ဖူးသေးသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုပေါင်း ရာနှင့်ချီ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လ ကပင် ရထားပေါ်မှ ဆင်းလာသည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ပြောင်းရွှေ့ လူရမ်းကား အုပ်စုတို့က ကန်ချခဲ့ သောကြောင့် ဂျာမနီပြည်သူ များသည် ရွှေ့ပြောင်း လာသူများနှင့် မူဆလင်များကို မနှစ်မြို့ တော့ပေ။
ထိုသို့ ရမ်းကားမှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ပိုဖြစ်လေ ရွှေ့ပြောင်းေ ရာက်ရှိလာသူ လူပေါင်း တစ်သန်းကို လက်ခံခဲ့သည့် ဝန်ကြီးချုပ် မာကယ်လ် ပိုပြီး အပြစ်တင်ခံ ရလေဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဥရောပ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု နှေးကွေးနေစဉ် ဗြိတိန် က ထွက်သွား သောကြောင့် ပိုမိုအထိနာ ရသည်။ ဗြိတိန်သည် ဥရောပသမဂ္ဂတွင် အဆင့်(၂) နေရာကို ရယူထားသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ က စီးပွားရေး အတွက် အဖြေရှာမရ ဖြစ်နေသည့် အချိန်မှာပင် ဥရောပ သည် အကြမ်းဖက် သမားတို့၏ တိုက်ရိုက် ပစ်မှတ် ဖြစ်လာသည်။ လုံခြုံမှုအရှိဆုံး ဟု ဆိုထားသည့် အမေရိကန်ပင် ISIS တို့၏ အကြမ်းဖက်မှု များကို ခံရသည်။
ထို့ပြင် ဥရောပ၏ ရှုပ်ထွေးလွန်း လှသည့် မူဝါဒများနှင့် တစ်နိုင်ငံချင်း စီ၏ မတူညီသည့် မူဝါဒများကြောင့် ဥရောပနိုင်ငံ များအချင်းချင်း သဘောထား ကွဲလွဲပြီး နားလည်မှု လွဲခဲ့ကြသည်။ ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည် များကို အပြန်အလှန် အချိုးကျခွဲဝေ လက်ခံရေး ဆိုသည့် ဥရောပသမဂ္ဂ ၏ သတ်မှတ်ချက်ကို မလိုက်နာသည့် နိုင်ငံများပင် ရှိကြသည်။ ထို့ပြင် ဥပဒေကို မလိုက်နာသည့် အပြင် နိုင်ငံလုံခြုံရေး ကိုသာ ဦးစားပေးပြီး နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးခတ် သည့် နိုင်ငံများကလည်း ရှိသေးသည်။ ဟန်ဂေရီက ပထမဆုံးမိုင် ၁၁ဝ ရှိသည့် ခြံစည်းရိုးကို ဆားဘီးယား နယ်စပ်တွင် ခတ်ပြီး ဒုက္ခသည်များ ဝင်မလာ နိုင်အောင် လုပ်ခဲ့သည်။
သြစတြီးယား ကလည်း နိုင်ငံထဲသို့ ဒုက္ခသည်များ မဝင်ရောက် နိုင်ရန် ခြံစည်းရိုး ခတ်မည်ဟု ဆိုသည်။ ထို ဥရောပနယ်စပ် ခြံစည်းရိုးများက တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် များအတွက် များစွာ အခက်တွေ့စေပြီး ဘလိတ်ဓား ခြံစည်းရိုး များကြောင့် ဒဏ်ရာ ရပြီး သေဆုံးရသည့် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် များပင်ရှိသည်။
ဥရောပနိုင်ငံများက ဂျာမနီ ဝန်ကြီးချုပ် မာကယ်လ် ကို ဒုက္ခသည်များ လက်ခံရေး အစီအစဉ်တွင် လက်ညှိုးဝိုင်းထိုး ကြပြီး ထို အတွက်ကြောင့် ဥရောပသည် စည်းလုံးမှု ပျက်ပြားကြသည်။ ယခုဥရောပတွင် စီးပွားရေး အားနည်းနေသည် သာမက အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန် တိုက်ဖျက်မှု များလည်း အားနည်းနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဥရောပနိုင်ငံများ အချင်းချင်း သတင်း အချက်အလက် မျှဝေပြီး အနီးကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဥရောပနိုင်ငံ များတွင် ဝန်ကြီးချုပ်များ နုတ်ထွက်သည့် နိုင်ငံက နုတ်ထွက်၊ ပြည်သူ၏ ဝေဖန်မှုကို ခံနေရသည့် နိုင်ငံက ဝေဖန်ခံနေရ၊ စီးပွားပျက် ကပ်ဆိုက်သည့် နိုင်ငံက ကပ်ဆိုက် နှင့် ယခု အချိန်ထိပင် လုံခြုံရေးကို ရှေးရှု၍ ပီပြင်အောင် မလုပ်နိုင် သေးပေ။ ထိုအချက်ကပင် အကြမ်းဖက်သမား များကို ကြားထဲက လှုပ်ရှားခွင့် ပေးထား သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ အမေရိကန်တွင် ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမနီကဲ့သို့ ခေတ်စားလာသည့် ထရပ်ကားဖြင့် ဝင်တိုက်သည့် အကြမ်းဖက်မှု များကို အကြမ်းဖက်မှု စာရင်းထဲတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား လာနေရပြီ ဖြစ်သည်။
အနောက်အုပ်စု အတွက် လုံခြုံရေး မျက်ခြည်ပြတ်ခံ၍ မရ ဖြစ်နေသည်။ ပြင်သစ်တွင် ဆိုလျှင် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကာလ ကို ထပ်မံ တိုးမြှင့်ကာ ယခုအချိန်ထိ လုံခြုံရေးရဲ အရေအတွက်ကို သောင်းချီပြီး ချထားတုန်းပင် ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေး အပြည့်အဝ ပေးထားသည့် ကြားထဲကပင် အကြမ်းဖက်ရန် ချောင်းနေသည့် ဂျီဟတ်ဝါဒီ ငါးဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ရ သေးသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဇူးရစ်မြို့တွင်လည်း အစ္စလာမ်မစ် စင်တာအတွင်း သေနတ်သမား က ဝင်ပစ်သောကြောင့် လူသုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိမှုမှာ ဂျာမနီနိုင်ငံ ခရစ္စမတ်ဈေးတန်း ကို တိုက်ခိုက်ခံရမှု ဖြစ်စဉ်နှင့် တစ်ရက်တည်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်သည့် ရုရှားတွင် ဆိုလျှင်လည်း အကြမ်းဖက် သမားများနှင့် မကြာခဏ ပစ်ခတ် နေရသည်။ ပြင်သစ်သည် လုံခြုံရေး ဗျူဟာများ အတွက် အမေရိကန်နှင့် ပူးပေါင်းကာ မာရှယ်လော ထုတ်ပြီး ချက်ချင်းတန်ပြန် တိုက်ခိုက်မည့် ဗျူဟာများပင် ခင်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယင်းဗျူဟာ များသည် ယခု အချိန်ထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကောင်အထည် ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးပေ။
ဒုက္ခသည် အရေးကြောင့် ယခုအချိန်ထိ ဥရောပ ခေါင်းဆောင်များ အကြား ယခင်ကလောက် ညီညွတ်မှု မရရှိသေးပေ။ တကယ်ဆိုလျှင် ယခုအချိန်သည် ဥရောပ ခေါင်းဆောင်များ အချင်းချင်း စားပွဲ တစ်ဝိုင်းတည်း တွင် ထိုင်ကာ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး နှင့်လုံခြုံရေး ကဏ္ဍကို ဆွေးနွေးရမည့် အချိန် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ရုရှားနှင့်လည်း လုံခြုံရေးကဏ္ဍ နှင့် အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး ကဏ္ဍတွင် ဥရောပသမဂ္ဂ က မပူးပေါင်း မှုကြောင့် ထိရောက် သင့်သလောက် မထိရောက် ဖြစ်နေရသည်။ အကယ်၍ တခြားနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် စစ်ရေးကဏ္ဍ များကို ခဏဘေးဖယ် ၍ အမေရိကန်၊ ရုရှားနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ တို့ ပူးပေါင်းပြီး သတင်း အချက်အလက် မျှဝေကာ တက်ညီလက်ညီ အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်လျှင် ယခုထက် များစွာ ထိရောက်မည် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းရန် မဆိုထားနှင့် ယခုလက်ရှိတွင် ဥရောပ၌ ခေါင်းဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍ အားနည်း နေသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်း အားနည်းချက် များနှင့် မညီညွတ်မှု များကပင် အကြမ်းဖက် မှုများကို ဥရောပတွင် ပိုမိုဖြစ်ပေါ် လာစေသလား ဆိုသည့် အတွေးမျိုးကို တွေးနေရပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရ ပါသည်။
WCS ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် လင်းပိုင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးဧရိယာချဲ့၍ ကင်းလှည့်စစ်ဆေးနိုင်ရေး သင်္ဘောအသစ်တစ်စီး တည်ဆောက်သွားမည်
သားငှက် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ (WCS) ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဧရာဝတီလင်းပိုင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ဧရိယာ (Protected Area) ချဲ့၍ ကင်းလှည့် စစ်ဆေးနိုင်ရေး နှင့် ယခင်ထက် ပိုမိုထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် နိုင်ရေးအတွက် သဘောင်္ အသစ်တစ်စီး တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်မှ ၁၈ ရက် ထိ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မျိုးသုဉ်းရှားပါး ဌာနစု၊ သားငှက် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ (WCS)၊ စိမ်းရောင်စိုအဖွဲ့ (မန္တလေး)နှင့် ရေကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲ (မန္တလေး) တို့ပူးပေါင်း၍ ဧရာဝတီ လင်းပိုင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ဧရိယာ (Protected Area) အတွင်း ပုံမှန် ဧရာဝတီလင်းပိုင် သုတေသနပြု လေ့လာခြင်း၊ ငါးသယံဇာတနှင့် ဧရာဝတီလင်းပိုင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အသိပညာပြန့်ပွား စေခြင်း စသည့်လုပ်ငန်း များကို မော်တော်ငယ်ဖြင့် သွားရောက်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြကြောင်း၊ အဆိုပါ အသစ် တည်ဆောက်မည့် သင်္ဘော ပြီးစီးပါက ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနက ဦးစီး၍ လင်းပိုင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ယခုထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင် သွားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ဧရာဝတီလင်းပိုင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ဧရိယာ (Protected Area) သည် မန္တလေး၊ မင်းကွန်းမှ ကျောက်မြောင်း (ရေတော်ဘုရား)နှင့် မန္တလေးမြို့မှ စဉ့်ကူးမြို့နယ် ရွာသာကျေးရွာ ထိရှိပြီး၊ ၄င်းဧရိယာ အတွင်းတွင် လစဉ် ပုံမှန် ကင်းလှည့်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း လင်းပိုင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ဧရိယာ ထပ်မံတိုးချဲ့ ရန်လည်း စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၏ ပုံမှန် ကင်းလှည့် ခရီးစဉ် အစီရင်ခံ တင်ပြချက်များမှ သိရသည်။
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော်ကို လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ကာ ၇၆ ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပသွားမည်
မင်းဘူး ၊ ၂၈-၁၂-၂၀၁၆
ယခုနှစ် မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော်ကို လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ကာ ၇၆ ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားဂေါပက အဖွဲ့၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် များအရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တန်ခိုးကြီး ဘုရားစေတီ များ၏ ရက်ရှည် ဘုရားပွဲတော် များတွင် အပါအဝင် ဖြစ်သည့် မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်လျက် ရှိရာ လာမည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ ဧပြီ ၁၇ ရက်ထိ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်သည်။
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတော် သို့ လာရောက်ကြမည့် ဘုရားဖူး ဧည့်သည်များ အဆင်ပြေစွာ ဘုရားဖူး သွားလာနိုင်ရန် အတွက် မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပရိဝုဏ်ရှိ နမ္မဒါ တည်းခိုဆောင် လုပ်ငန်း၊ သန့်စင်ခန်း တင်ဒါလုပ်ငန်း၊ ရေချမ်းစင်၊ ညောင်ထောက်၊ ကန်တော့ပွဲ တင်ဒါလုပ်ငန်း၊ တည်းခိုဆောင် လုပ်ငန်းနှင့် ဈေးဆိုင်ခန်း လုပ်ငန်းစသည့် လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကဲ့သို့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါလုပ်ငန်း များနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လို သူများ အနေဖြင့် မင်းဘူးမြို့ရှိ ရွှေစက်တော် ဘုရားကြီး ဂေါပကအဖွဲ့ရုံးတွင် လာရောက်စုံစမ်း လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မင်းဘူးမြို့ မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားဂေါပက အဖွဲ့၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည်များ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ၍ သွားလာရသည့် ဒေသများ ပိတ်လိုက်သောကြောင့် ငွေအလျော်တောင်းယူမှု များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံ၍ သွားလာရသည့် ဒေသများကို သွားလာလည်ပတ်ခွင့် ပိတ်ပင် လိုက်မှုကြောင့် အဆိုပါ ဧည့်သည်များက ငွေအလျော် တောင်းယူမှု အများအပြားနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ရကြောင်း Union Of Myanmar Travel Association (မန္တလေး)မှ သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလလယ်ပိုင်း တွင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ဧည့်သည်များ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံကာ သွားလာလည်ပတ် ရသည့် ဒေသများသို့ သွားလာခြင်းကို ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း ထုတ်ပြန် လိုက်ရာ ထိုခရီးစဉ် ရေးဆွဲစီစဉ် ထားသည့် ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများကို ဧည့်သည်များက ငွေကြေးအလျော် တောင်းယူမှု အများအပြား ရှိလာကြောင်း Union Of Myanmar Travel Association မှ ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးရည်ထံ မှ သိရသည်။
''စာထုတ်ပြီး ကန့်သတ် နယ်မြေတွေ မသွားရဆိုပြီး လုပ်တာက လွယ်လွယ်လေး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အောက်ခြေက ခရီးစဉ်တွေက စီစဉ်ပြီးသားတွေမှာ ဒုက္ခတွေ ရောက်ကုန်ပါတယ်။ အဲဒီ နယ်မြေတွေကို သွားချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ရက်ကြိုပြီး စာတင်ရတယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးထိ တင်ရတယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက ခွင့်ပြုတယ် သွားခွင့်ကျမှ သွားလို့ရတယ်။ အဲဒီလိုသွားလို့ အကုန်ရထားတဲ့ ခရီးစဉ် တွေမှာ ဟိုဘက်က လာမယ့် နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေ ကလဲ ရောက်နေပြီ။ ဥရောပ ဘက်ကလူတွေ ကဆို လေယာဉ်တွေ စီးပြီး ထွက်လာနေပြီ။ အခုမှ သွားမရတော့ဘူး ပိတ်လိုက်တယ် ဆိုတော့သူတို့က လျော်တောင်းတာတွေ တော်တော်များ လာတယ်'' ဟု မန္တလေး ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်အတွင်း ရှိ Zone Express Travel မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း ဒေသတွင် နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များ အနေဖြင့် ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံကာ သွားလာရမည့် ဒေသများတွင် မိုးကုတ်၊ ပူတာအို၊ မူဆယ်၊ တမူး နှင့် မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော် ကားလမ်းပိုင်းတို့ ပါဝင်နေပြီး လတ်တလောတွင် နိုင်ငံတကာ မှ ဧည့်သည်များသည် မိုးကုတ်မြို့သို့ သွားလာရန် စီစဉ်ထားမှု အများအပြား ရှိနေပြီး မန္တလေးမြို့ရှိ ခရီးသွား ကုမ္ပဏီ ၃၇ ခုက စီစဉ်ပေးထားမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
''ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနက စာထုတ် လိုက်တာတော့ မြင်လိုက်တယ်။ စည်းစနစ်တကျလေး ဖြစ်စေချင်လို့ လူကြီးတွေက စီစဉ်လိုက်တာလို့ ပဲမြင်ပါတယ်'' ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ထိုကဲ့သို့ ခရီးစဉ်များ စီစဉ်ရေးဆွဲ ထားကာ သွားလာခွင့် မရရှိခဲ့ သောကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဧည့်သည်များက စီစဉ်ထားသည့် ငွေကြေးများ အလျော်တောင်း မှုများကြောင့် ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြ ရကြောင်း အဆိုပါ ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများထံမှ သိရသည်။
ရတနာပုံနေ့စဉ်သတင်းစာ ၊ စာ(၂၆)
KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ ထောင်ထားသည့် တိုက်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ
KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ ထောင်ထားသော တိုက်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုခံယူနေသော ဒေသခံပြည်သူတစ်ဦး ကိုတွေ့ရစဉ်
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ရွှေစက်ရပ်ကွက်နှင့် ပမ္မတီးရပ်ကွက်နေ ဗျာလေး၊ လာပေါ်ဖူး၊ အားဆာပါး နှင့် ခီဒီယု တို့လေးဦးသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် ဥယျာဉ်ခြံသို့ တောင်ယာ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ပြီး နေအိမ်သို့ ပြန်လာစဉ် မလဲကျေးရွာ ၏ အနောက်ဘက် မီတာ ၁၅ဝဝ ခန့်အကွာသို့ အရောက်၌ KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ ထောင်ထားသော တိုက်မိုင်းနှစ်လုံး တိုက်မိပေါက်ကွဲ ခဲ့သဖြင့်
မိုင်းစထိမှန် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါမိုင်းထိ လူနာများကို မြစ်ကြီးနား မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ဆေးကုသမှု ခံယူလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
After the Tatmadaw had seized outposts of KIA insurgents including the fortified Gidon Post in Waingmaw Township, Kachin State on 16 this month, its columns launchedatrail attack on the point 768 (Lai Hpawng by KIA) which is located seven miles east of Myitkyina- Bhamo road and where 3rd battalion under 5th brigade of KIA insurgents headquartered on 21 this month.
Based on this initial attack, the Tatmadaw made necessary preparations in detail, and launched attack with the supporting aerial bombardment and infantry, artillery, tank and heavy weapon assaults in the morning. The first post was overrun at 3.30 pm today. Follow-up Tatmadaw offensive attacks led to the fall of the main enemy defence hill and six minor posts at 5.15 pm.
Yesterday’s captured Point-768 (Lai Hpawng called by KIA) post is located on the other side of Nanttaphat creek, opposite of which lies Battalion 252’s Gidon Post that KIA lost on 16 December. It is alsoapost built to provide security for the communication route to KIA Headquarters Liza, Lisinpote and other posts around No.6 boundary post estimated map reference (MJ- 022995) and threaten Myitkyina and Waingmaw townships. The post was also used asacommunication route to Brigade 1-controlled Ingunla region.
Although KIA outposts have been occupied, information about redeployment and casualties from both sides is being collected in detail due to time limit. After that, further news will be released, according to the Office of the Commander-in- Chief.
Labels: Insurgent, TATMADAW, terrorist
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Olivier RICHARD အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Olivier RICHARD အား
ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် ယမန်နေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Olivier RICHARD အား လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Olivier RICHARD နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့ တက်ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး နောက်ဆုံး အခြေအနေ အားလည်းကောင်း၊ တပ်မတော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ် စွပ်စွဲ ပြောဆိုလျက် ရှိသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုအပေါ် လက်တွေ့ မြေပြင်တွင် တပ်မတော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အစိုးရ နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေး နေမှု အခြေအနေများ အားလည်းကောင်း၊ လုံခြုံရေးနှင့် ဆက်စပ်လျက် လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု အထောက်အပံ့များ ဆောင်ရွက်ပေး နေမှု အခြေအနေ များအား လည်းကောင်း အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) နှင့် သံအမတ်ကြီး တို့သည် အဖွဲ့ဝင် များနှင့်အတူ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
28 12 2016 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၀) အမှတ်(၂၅)
AuroraJournal(20-25) by TheMyawadyDaily on Scribd
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး လာသည်နှင့်အမျှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများ တွေ့ကြုံလာနိုင်
မြိတ် ၊ ၂၇-၁၂-၂၀၁၆
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာသည်နှင့်အမျှ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးရှိ ကျွန်းများသို့ လူအရောက် အပေါက် များပြားလာပြီး အညစ်အကြေးများ စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ကမ်းခြေရှိ သဲများကို ထုတ်ယူခြင်း တို့ကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများ တွေ့ကြုံနိုင်ခြေ ရှိကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တောရိုင်းတိရ စ္ဆာန် နှင့် သဘာဝအပင်များ အဖွဲ့ (FFI) မှ သတင်းထုတ်ပြန် ထားကြောင်း သိရသည်။
''အဏ္ဏဝါ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေက အကောင်းပကတိ ရှိနေတဲ့ ဂေဟစနစ်ပေါ် မူတည်ပြီး အဏ္ဏဝါရေပြင် ထိန်းသိမ်းရေးရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်မြောက်ဖို့ ဆိုရင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်နဲ့ လိုင်စင်တွေက ရလာတဲ့ဝင်ငွေ တချို့ကို ဒေသအတွင်း ပြန်လည် အသုံးချပြီး အဏ္ဏဝါရေပြင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းမှာ ခွဲဝေအသုံးချ သင့်ပါတယ်'' ဟု နိုင်ငံတကာ သားငှက်တိရ စ္ဆာန် နှင့် အပင်များ လေ့လာရေး အဖွဲ့ (FFI) မှ မြန်မာနိုင်ငံ အစီအစဉ် ဒါရိုက်တာ ဖရန့်မွန်းဘတ် က ပြောသည်။
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝ မပျက် တည်ရှိနေသေးသည့် ကမ်းခြေများ၊ ဆလုံလူမျိုး တို့၏ ယဉ်ကျေးမှုများ နှင့် ထင်ရှားသော ရေအောက် သန္တာကျောက်တန်း များကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ စိတ်ဝင်စား နေပြီး လက်ရှိတွင် ဟိုတယ် ၄၇ လုံးနှင့် ဆောက်လုပ်ရန် စီစဉ်ထားသော ဟိုတယ်နှင့် အပန်းဖြေရိပ်သာ ၃၉ ခုရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် သဲတူးဖော်ခြင်း၊ ဒီရေတောများ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဗုံးခွဲ၍ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့် ကမ်းနီးရေပြင် များ၌ တရွတ်ဆွဲ ပိုက်ဖြင့် ငါးဖမ်းခြင်းများကို ဆက်လက် မလုပ်ဆောင် ကြရန်နှင့် ဒေသခံများအား ပံ့ပိုးရန် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးကြောင်း တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော် ကပြောသည်။
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ရန် ရည်ရွယ်၍ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ FFI နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြု ဌာန (MCRB) တို့ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ၌ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုး သက်ရောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဒေသခံများ ပါဝင်သော တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာ၌ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင် များက ထောက်ပြကြကြောင်း သိရသည်။ (၄၄၇)
Labels: ခရီးသွားလုပ်ငန်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
ပုဂံယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်း စီးပွားရေးအရ ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယို ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုများအတွက် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရမည်
ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ အတွင်း စီးပွားရေးအရ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုများ အတွက် တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံကာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှု အတွက် ငွေကျပ် တစ်သိန်း၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှု အတွက် ငွေကျပ်ငါးသိန်း ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန သတင်းများ အရ သိရသည်။
ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေအတွင်း စီးပွားရေးအရ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း များအတွက် အမျိုးသားပြတိုက် နှင့် စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာန၊ ပုဂံဌာနခွဲတွင် ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံကာ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ ရိုက်ကူးကြရမည် ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ပုဂံ ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေသို့ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ခရီးသွား ဧည့်သည် လာရောက် လည်ပတ်မှု တိုးတက်များပြား လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ ခရီးသွား ဧည့်သည် လာရောက် လည်ပတ်မှု တိုးတက်များပြား လာသည်နှင့် အတူ အချို့သော ခရီးသွားများမှာ ပုဂံယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေနှင့် စေတီပုထိုး များတွင် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မလျော်ညီသော ပြုမူ နေထိုင်မှုများ၊ ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးမှုများကို ပြုလုပ်လာခဲ့ ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ အတွင်းရှိ စေတီပုထိုး များတွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် သင့်လျော်ခြင်း မရှိသည့် ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှု များကို သာသနာတော် ညှိုးနွမ်းစေမှုနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး နှိုးဆော်ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ အသိပေး နှိုးဆော်ချက် ထုတ်ပြန်ပြီး နောက်ပိုင်း စီးပွားရေးအရ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးမှုများ အတွက် အသိပေးချက်များ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (၃၃၆)
Labels: တားမြစ်ချက်, ဘာသာရေးဆိုင်ရာ, နှိုးဆော်သတင်း
အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးများ စစ်ဆေးရာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ကဲ့သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အဖွဲ့များ ပါဝင်သင့်
စားသုံးရန် မသင့်သည့် အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးများ စစ်ဆေးရာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ကဲ့သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေး သည့် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်း ပါဝင်သင့်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ သန့်ရှင်းရေး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးများ စစ်ဆေးရာတွင် အဖြေတစ်ခု ထုတ်ပေးနိုင်ရုံသာ ဖြစ်နေကာ ထိရောက်သော အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသကဲ့သို့ ကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ရာ နေရပ်များကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မပါဝင် သေးကြောင်း သိရသည်။
''ဒါကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး တွေက ဆင့်ကဲဖော်ထုတ်မှု တွေရှိမှလဲ ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် " ဟု အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ပြောပြသည်။
စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ FDA နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆေးဝါးနှင့် အစားအသောက်များ စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းအဖွဲ့ အဖြစ် ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး FDA က စားသုံးရန် မသင့်ဟု ကြေညာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် စက်ရုံပိတ်သိမ်းခြင်း များကို ဆောင်ရွက် သော်လည်း အချို့ကုန်စည် များမှာ ထုတ်လုပ်သည့် နေရာ အတိအကျ မပါရှိကြောင်း သိရသည်။
စားသုံးရန် မသင့်သည့် ဆေးဝါးနှင့် အစားအသောက် များ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု များကို တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အနှံ့ရှိ ဈေးကွက် အသီးသီးသို့ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ မြို့ကြီးများတွင် စားသုံးရန် မသင့်သည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များကို သိရှိရန် ပညာပေး ကြပ်မတ်မှုများကြောင့် အတော်အသင့် သိရှိလာပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကျေးလက်ဒေသ များနှင့် မြို့ပြဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များတွင် အဆိုပါ စားသုံးရန် မသင့်သည့် အစားအစာများ ဈေးကွက် တွင်ကျယ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြို့ကြီးများတွင် ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်လာသည့် အတွက် အချို့သော ကုန်ပစ္စည်းများ နယ်မြို့များသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိ သွားကြောင်း သိရသည်။
''စီးပွားရေးသမား တွေက ကျေးလက်ကို ပစ်မှတ်ထား လာတယ်။ ဒါတွေကို ထိထိ ရောက်ရောက် မကိုင်တွယ်နိုင် သေးလို့ စားသုံးသူ နစ်နာမှုတွေ ရှိနေဆဲပါ'' ဟု စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန(မြင်းခြံ)မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
မန္တလေးမြို့ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များ၊ မူလတန်း စာသင်ကျောင်းများ အပါအဝင် ဈေးဆိုင်များတွင် သုံးစွဲရန် မသင့်သည့် အစားအသောက်များ၊ ဆေးဝါးများ၊ ခြင်ဆေးခွေများ မြင်တွေ့နေရဆဲ ဖြစ်ပြီး ကျေးလက် ဒေသများတွင် အများအပြား ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ဈေးကြီးများ၌ စစ်ဆေးခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း စစ်ဆေးခြင်း အစရှိသည့် စစ်ဆေးမှုများ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဈေးသည်များထံမှ ပစ္စည်း သိမ်းခြင်းကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ များတွင် ထုတ်လုပ်သူ များကိုသာ အဓိက အရေးယူ စေလိုသည့် မှတ်ချက်များလည်း များပြား လာကြောင်း သိရသည်။
'' FDA က လာမယ့်နှစ်မှာ ပညာပေးထက် အရေးယူမှုတွေ ပိုလုပ်မယ်ဆိုရင် တကယ်ထုတ်နေတဲ့ သူတွေကို အရေးယူသင့် ပါတယ်။ ခုဟာက တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စား ဈေးသည်တွေ ဖြစ်နေတော့ မရှိဆင်းရဲသား တွေပဲ နစ်နာသလို ဖြစ်နေပါတယ်'' ဟု သန့်ရှင်းရေးဌာန တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆက်လက် ပြောပြသည်။
ထို့ပြင် မြို့ပြများနည်းတူ ကျေးလက်ဒေသများ သို့လည်း ထိထိရောက်ရောက် စစ်ဆေးခြင်း၊ ပညာပေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်း စသည်တို့ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်သော လုပ်ဆောင်မှု များလည်း ဖြစ်ရန် လိုကြောင်း သိရသည်။
Labels: မန္တလေးသတင်း, အစားအသောက်ဆိုင်ရာ